Gịnị Bụ Nlele ojii? Atụmatụ, Uru & ọzọ
nlekota igwe ojii | Nleba anya netwọkụ
Bipụtara: Mee 05, 2020
Emelitere: October 19, 2021
N'ime blọọgụ a
Gịnị bụ Monitoring Cloud?
Kedu Nlekọta Igwe ojii Gụnyere?
Kedu onyinye dị iche iche na nlekota igwe ojii?
Kedu uru nke nlekota igwe ojii?
Kedu ihe bụ njirimara Cloud Monitoring?
Kedu ihe bụ isi ihe eji eme Motadata gosipụtara nke na-enyere aka nyochaa, jikwaa na njikwa akụ nke igwe ojii?
Onye ahia ahia ahia
Na ụwa taa ejikọrọ ụwa onye ọ bụla, n'ụzọ nkịtị onye ọ bụla nwere njikọ ịntanetị na-enweta igwe ojii kwa ụbọchị site n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ. Ma nke a bụ eziokwu maka nzukọ niile; igwe ojii akụrụngwa abụrụla akụkụ dị mkpa nke ọrụ nzukọ yana o doro anya na ha chọrọ igwe ojii nlekota nyocha iji nyochaa ya.
Cloudgwé ojii na-enye mmụba azụmaahịa na-enweghị atụ na scalability & agility. Ọ bụ ezie na uto na ojiji igwe ojii, na-abịa ngwa ngwa mkpa iji nyochaa arụmọrụ netwọk. Nke ahụ bụ ebe igwe ojii nlekota na-abata.
Inyocha ígwé ojii infra na-enyere azụmahịa aka ilegide anya na oge mmeghachi omume, nnweta, ogo ojiji bara uru, ogbugbu, wdg dịka nsogbu nsogbu.
Organitù dị iche iche enweghị ike ịnagide ịnwe mmebi data, oge nkwụsị, ma ọ bụ oge nzaghachi oge na nke ahụ bụ ebe igwe ojii nyocha na-abata. Igwe ojii nlekota igwe ojii na-agụnye amụma nke nsogbu, ma nyere ha aka ịdebe egwu na oge mmeghachi omume, usoro ihe oriri, arụmọrụ na nnweta igwe ojii.
Nlekọta igwe ojii nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ, dịka ịmebe netwọkụ gụnyere itinye atụmatụ maka ịdị adị.
Na blog a, anyị ga-atụle ajụjụ ole na ole dị mkpa gbasara nlekota igwe ojii.
Kedu ihe bụ isi nke nyocha igwe ojii?
Mana tupu anyị abanye n'ime nkebi nke ọ bụla, ị ga-eburu n'uche na nnukwu ọrụ dị na ndị ọrụ igwe ojii chọrọ ịkwalite ngwaọrụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịga nke ọma nyochaa ngwa dị egwu nke igwe ojii.
Enwere ike ịkọwa nlekota igwe ojii dị ka usoro nke iji nlezianya na-elele ngwa na ọrụ igwe ojii. Ọ bụ usoro ịchịkwa na nyochaa arụmọrụ arụmọrụ na usoro n'ime igwe ojii.
Usoro a gụnyere iji akwụkwọ ntuziaka yana ịlele IT akpaghị aka (yana ngwaọrụ ITOM / NMS) yana ụfọdụ usoro nchịkwa nchịkwa igwe ojii iji hụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma & nke ọma.
Na mkpokọta, admins nwere ikike inyocha ahụ ike na arụmọrụ nke igwe ojii yana ihe ọrụ ndị ọzọ.
Ihe na-echebara echiche na-adabere n'ụdị igwe ojii nke nzukọ a nwere, yana otu ha si eji ya. Ọ bụrụ na ha ejiri infra ojii mepere emepe, ha n'ozuzu ha nwere oke njikwa maka ijikwa infra IT. Igwe ojii, nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji, na-enyekwu njikwa na mgbanwe, yana uru itinye n'ọrụ.
N'agbanyeghị ụdị igwe ojii nke ụlọ ọrụ na-eji, nlekota bụ akụkụ dị mkpa nke arụmọrụ na nchekwa.
Enwere ọtụtụ ihe ga - arụ ọrụ na mmekọrịta iji bulie arụmọrụ. Igwe ojii nyocha na-agụnye ihe ndị a:
Nlekota VM: Nyochaa igwe di iche iche (instances) nke emere na igwe ojii.
Nleba anya na ibe weebụ: Nyochaa okporo ụzọ, usoro, iji akụ na nnweta nke weebụsaịtị ndị igwe ojii na-enweta.
Nyochaa data: Nyochaa ihe dị iche iche nke nchekwa data igwe ojii dịka usoro, ajụjụ, nnweta na oriri.
Nlekota nchekwa: Nyochaa ihe nchekwa nchekwa na igwe ojii na itinye n'ọrụ itinye n'ọrụ.
Nyocha Virtual Network: Ckingchọpụta ihe ntanetị netwọk, njikọ, ngwaọrụ na arụmọrụ.
Nyochaa ntinye: Jiri nlezianya nyochaa nnweta & arụmọrụ nke ngwa dị oke egwu nke etinyere n'igwe ojii ma ọ bụ na AWS ma ọ bụ Microsoft Azure.
E nwere ụdị igwe ojii dị iche iche chọrọ nlekota. Ọ bụghị naanị banyere sava nyochaa na Google App Engine, Azure ma ọ bụ AWS. Maka ndị ahịa ụlọ ọrụ ọ bụ maka ileba anya n'ihe ha na-eri (IT Infrastructure - Application, Database, OS, Server, Network wdg) na iji rụọ ọrụ ha kwa ụbọchị bifurcated n'ime ihe ha jikwaa na ihe ndị na-ere ahịa na-ejikwa.
Ngwá ọrụ nlekota igwe ojii dị mkpa ka ha na-enye nleba anya, njikwa, akụkọ na ọbụnadị na-adọ gị aka na ntị. Ikuku igwe ojii na-enyere aka belata obere oge na njikarịcha arụmọrụ. Followingzọ ụfọdụ bụ otu esi ejikwa igwe ojii arụ ọrụ ngwa ngwa ma zere mbipụta oge niile:
Nche data: Maka nchekwa ọ dị mkpa ịnweta njikwa data na njedebe niile, si otú a na-ebelata ihe egwu. Ndozi ngwa ngwa nke nyocha, nyocha ma mee ihe na data ka ọ na-ahapụ netwọk na-enyere aka ichebe data ọnwụ. Ọ dịkwa oke mkpa iji nyochaa, nyochaa ma nyochaa data na-abata iji zere malware na mmebi data tupu ebudata ya na netwọkụ.
API: Thegwé ojii nwere ike ịnwe ọtụtụ nsogbu arụmọrụ n'ihi arụghị ọrụ API. Enwere ike izere arụmọrụ API nke igwe ojii site na iji API ndị na-arụ ọrụ site na ihe kama ịrụ ọrụ. Emechaa, a ga - enwe ike ịkpọ oku API pere mpe ma pere mpe okporo ụzọ. API ndị nwere ụdị mgbochi data ole na ole na arụmọrụ na-arụpụta arụmọrụ ka mma.
Ngwa Ọrụ: Inye nkwado akụrụngwa yana oge nzaghachi nke ngwa dị mkpa ịghọta ihe na-emebi arụmọrụ ahụ.
Iji chọpụta ebe na mgbe igbu oge, ịkwesịrị ịgbaso usoro ọrụ nke ngwa ahụ.
Ngwaọrụ ndị na-esochi oriri, arụmọrụ na nnweta dị mkpa iji nyochaa igwe ojii ma na-ekwe nkwa nnyefe data echedoro.
Naanị iji chịkọta ma gosipụta isi uru:
Enweghị akụrụngwa IT chọrọ
Enweghị CAPEX - naanị na-akwụ ụgwọ ndenye aha kwa ọnwa
Mbido na nwụnye ngwa ngwa dịka akụrụngwa akụọlarị
N'ọtụtụ dị ka ịchọrọ - ị nwere ike inyere ndị otu nha aka
Ihe nchikota ndi ozo
Mepee API maka njikọta enweghị nkwekọ
Mmalite azụmahịa dị mma
Nlele zuru oke n’ime Akụkụ Cloud
Nyochaa ọrụ na ngwa sitere na ọnọdụ ọ bụla nwere ịntanetị
Dị ka Gartner si, M ndị isi O&O kwesiri itinye ihe ndị a iji mejuo ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu ọkachasị n'oge ngwangwa ngwa ngwa nke na-abanye:
Andbawanye ikike ibu ọrụ na onodu ya site na enyemaka nke ọrụ igwe ojii
Site n'enyemaka nke igwe ojii ihe owuwu ụlọ ọrụ ndị isi IT nwere ike imepụta akpaaka & wulite ikike maka ọchịchọ siri ike
Ileba anya n'ịrụ ọrụ oge niile iji hụ na arụmọrụ azụmahịa dị
Centerslọ ebe a na-echekwa ya, enweghị ike ijikwa ndị chọrọ ime ihe, ịgafe igwe ojii bụ ihe nwere ike ịgara gị
Idozi ngwa ọrụ igwe ojii iji gbochie ụzọ dị mkpirisi akụ na mpaghara.
Nlekọta igwe ojii na-eme ka ọ dị mfe ịtụle usoro na ịchọpụta ihe egwu nwere ike ịdị na igwe ojii.
Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime isi ike:
Nyocha na ikike ịkọtara maka nnabata nchekwa
Enweghị njedebe nlezianya iji hụ na nyocha nke faịlụ na-adịbeghị anya ma gbanwee na ozugbo
Ime otu ndi oru igwe ojii
Nnukwu data nke igwe ojii gafere ebe dị iche iche ekesara
Enwere ike ịmata mwakpo ma ọ bụ nkwenye nwere ike site na ime ka ọhụhụ n'ime ọrụ, ngwa yana omume faịlụ.
Nlele N’igwe, Ọha na Ọcha
Igwe ojii nyocha doro anya ma ọ bụrụ na ị banye na igwe ojii nzuzo maka ihe ole na ole anyị kwuru na mbụ (visibiliti na njikwa), ebe ị nwere njikọ na ngwanrọ ngwanrọ na usoro.
Ka o sina dị, nlekota oru nwere ike ịbụ nsogbu ọzọ n'ihu ọha ma ọ bụ igwe ojii ngwakọ.
Igwe ngwakọ ngwakọ na-eweta nsogbu ndị a na-adịghị ahụkebe n'ihi na data nwere ma igwe ojii ọhaneze ma nke onwe. Mgbochi banyere nkwado na nche nwere ike ịmepụta nsogbu maka ndị ọrụ ịnweta data.
Ndị admins nwere ike ịkọwapụta nsogbu arụmọrụ site na ịchọpụta igwe ojii nke data ahụ ga-echekwa na mgbakwunye na data iji melite.
Mmekọrịta nke data nwere ike ịbụ ihe mgbochi n'okporo ụzọ, mana ịkọwapụta data n'ime ngwa ngwa na obere akụkụ na-enyere aka n'ibelata nsogbu.
Agbanyeghị igwe ojii nkeonwe na-enye ikike karịa, iji hụ na arụmọrụ kacha mma onye ka kwesịrị inyocha ibu ọrụ.
Y’oburu n’inweghi echiche doro anya banyere ibu oru na oru netwoki, yabụ na ịgaghị enwe ike ịkọwapụta ụkpụrụ ụlọ ma ọ bụ mgbanwe nhazi, maka ogo ịrụ ọrụ ka mma ma ọ bụ teknụzụ ndị ọzọ.
Akụrụngwa nlekota IT (ITOM) dị ka Motadata bara uru maka nlekota igwe ojii, ebe ha nwere ike ịgbaso ogbugbu, kọọ nsonaazụ, ma kpachara anya ka ị ghara inwe nsogbu nchịkwa.
Sọftụwia ahụ nwere ike inyere ndị ọrụ aka nyochaa, nyochaa, bulie ma dozie nsogbu achọpụtara na ngwugwu ọ bụla nke igwe ojii site na isi ruo aka nke onye ọrụ njedebe ma nye ọhụhụ kachasị mma na akụ ojii.
Motadata na-enyocha Amazon AWS, Microsoft Azure, Google App Engine, na ngwakọ igwe ojii.
Igwe ojii nyocha igwe ojii nke Motadata bụ akụkụ nke sọftụwia ITOM a makwaara dị ka Infrastructure Intelligence Platform (IIP) na-enyocha usoro dịka nnweta, oge nzaghachi, na ojiji nke igwe ojii, wdg.
AWS AIX: Nweta nyocha ọhụụ na nlekota AWS. Nyochaa arụmọrụ nke ngwa AWS kwadoro. Dọrọ na azụmahịa ọ bụla, wepụ nkọwa ọkwa koodu dị oke mkpa iji dozie nsogbu arụmọrụ maka ngwa AWS kesara gị.
Google App Engine: Motadata enye unabridged Google App Engine nlekota ike nke-enye gị ohere n'ụzọ dị irè na ngwa ngwa nyochaa gị ígwé ojii dabeere ego tinyere gị na-premise netwọk.
Microsoft Azure: Nyochaa Microsoft Azure na-arụ ọrụ ma na-enyocha itinye n'ọrụ nke akụ na ụba na igwe ojii, yana nyochaa KPI dị oke egwu dị ka CPU, nchekwa, ebe nchekwa na ojiji akụ.
Site na blọọgụ a anyị ghọtara na Nlekọta igwe ojii abụrụla akụkụ dị mkpa nke azụmaahịa ma yabụ nyochaa dị mkpa dị mkpa.
Ezigbo ihe ngwọta igwe ojii na-eme ka ụlọ ọrụ igwe ojii rụọ ọrụ site na mpaghara dị iche iche na metrik iji hụ na nsonaazụ chọrọ ka a rụpụtara. Nke a bụ ebe nyocha nlekota dị ka Motadata Cloud, na-enye otu echiche nke akụrụngwa IT - netwọkụ, ngwa, nchekwa data, sava iji nyere gị aka idozi nsogbu gị siri ike na nsogbu a pụrụ ịdabere na ya ngwa ngwa, naanị & oke ego.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inweta nhụta zuru oke na igwe ojii gị site na iji kọwaa akụkọ ngwangwa igwe ojii zuru oke, nke a na - emeghe site na Network Monitoring Platform's Cloud Monitoring Module, debanye aha maka ikpe ikpe n'efu taa!